Hepa Myọcha H13 H14 U15 Alibab Mini Pleat HVAC Panel HEPA Myọcha maka Laminar Flow Cabinet, Laboratory, Clean omslọ - China Hepa Myọcha H13 H14 U15 Alibab Mini Pleat HVAC Panel HEPA Myọcha maka Laminar Flow Cabinet, Laboratory, Rolọ dị ọcha Supplier, Factory –Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Mpempe Eke Nrụpụta Elu
>lọ>ngwaahịa>Industrial Air purifier>Mpempe Eke Nrụpụta Elu
Hepa Myọcha H13 H14 U15 Alibab Mini Pleat HVAC Panel HEPA Myọcha maka Laminar Flow Cabinet, Laboratory, Cleanlọ dị ọcha
Bụrụ onye nyocha nke ikpeazụ mgbe ị na-arụkọ ọrụ oghere gel ma ọ bụ FFU
95 pleats / feet, 20% dị elu karịa ngwaahịa nkịtị, na-eweta nkwụsi ike dị ala na ndụ ogologo
Mpempe akwụkwọ fiber na-acha ọcha nke ọma, ezigbo nguzosi ike nke nrụpụta nrụpụta
Ọdịdị zuru oke nke ụdị "V", belata usoro nguzogide
Ndị na-azụ azụ abụọ
Onwe nwalere dika EN 1822
:Dị: nzacha arụmọrụ dị elu
Media: Akwụkwọ iko glass
Etiti: Extruded na anodized aluminum (Sharp Edge)
Nkewa: Kpochapụ kpụ ọkụ n'ọnụ
Ntinye ikpeazụ nrụgide ikpeazụ: 300Pa
Okpomoku: 90ºC kachasi oru n’iru
Dị iche iche ọkpụrụkpụ iyo na dị iche iche larịị nke filtration arụmọrụ, mmekọrịta mmekọrịta nke mbụ iguzogide na airflow ọsọ.
Knife Mini-Pleatedated HEPA / ULPA Myọcha ， Klas H13 ka U16
Nrụgide nrụgide （Pa）
Akụkụ vs Ọdịdị ikuku
Akụkụ (WxH) Ikuku Ikuku （m3 / h）
(Ink) (Mm) @ 0.45m / s
Model aha ya bụ ọchịchị
Jikọtara na imepụta ebe dị ọcha na nke dị ọhụrụ maka ndị mmadụ, Sffiltech bụ ọkachamara na mma na-atọ ụtọ ikpo ọkụ na nzacha ulpa. Dịka otu n'ime ndị nrụpụta na ngwa ahịa kacha mma, anyị nwere ike ịkwado gị mma kacha mma na arụmọrụ kwụsiri ike maka ngwaahịa anyị. Biko obi sie gi ike izu.
High arụmọrụ / ultra elu arụmọrụ V / W ụdị ikuku nyo v akụ hepa nyo
H13 H14 Elu arụmọrụ ikuku Myọcha HEPA Myọcha Na Seperator